Patio Bellavista Center, Trade Center Patio Bellavista - Santiago
Adiresy: Chile, Santiago, Providencia, Bellavista 052, Kianjan'ny Constitucion 30
Tetikasa mandeha: Mon. - cf. amin'ny 10:00 hatramin'ny 21:00, Alatsinainy. - Sat. 10:00 hatramin'ny 22:00;
Rafitra fananganana: fivarotana, cafés, fivarotana fahatsiarovana.
Ny iray amin'ireo fahafinaretana mandritra ny dia ny fividianana , izany hoe, ny fahafahana hitondra tranokala sy fanomezam-pahasoavana mahaliana. Ao Santiago, tsotra dia tsotra, raha afaka mitsidika fivarotana iray ianao. Ny foiben'ny Patio Bellavista dia miorina eo afovoany ao an-tanàna ary toeram-pivarotana tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana, fa koa ho an'ny mpizaha tany.
Tsy mitovy amin'ny habeny izy io, satria sarotra ny hitady toeram-pivarotana faharoa any Santiago. Lasa foiben'ny fiainana ho an'ny tanora sy ny taranaka taranaka ny patio Bellavista ary manana atmosfera tena tsara.
Inona no azoko vidiana any afovoan-tanàna?
Manomboka amin'ny 10:00 hatramin'ny 02:00 ny foibe - Alatsinainy hatramin'ny Talata; ny Alarobia - 10: 00-3: 00; Alakamisy, Zoma, Asabotsy ary faran'ny herinandro - manomboka amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 4:00 alina. Misy fiara fitaterana ambanin'ny tany, izay ahafahanao miala amin'ny fiara mandritra ny faharetan'ny fividianana. Fitsidihana maro ny fitsidihana an'i Patio Bellavista. Ny foiben-toeram-pivarotana dia malaza be, satria eto dia afaka mividy mora ianao:
toy ny akanjo marika eran-tany, ary vokatra amin'ny asa tanana;
Misy fivarotana manokana mivarotra divay Shiliana malaza;
Ny vehivavy dia ho faly amin'ny fahafahana hameno ny firavaka vita amin'ny firavaka volamena sy volafotsy, lapis lazuli;
Ny olona sy ny ankizy am-pifaliana dia hankasitraka ireo sarontava fahiny, sary hosodoko.
Ao amin'ny Patio Bellavista dia azonao atao ny mividy ny vokatra avy amin'ny mpanakanto sy ny mpanakanto ao ART Home, ary ny asa tanana - ao ART Rose. Misy ihany koa fivarotana biorgan sy endri-javatra. Ary hatramin'ny 8 trano fandraisam-peo vita amin'ny firavaka.
Kafe sy toeram-pisakafoanana ao amin'ny Centre
Afaka miala sasatra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ianao, na any amin'ny trano fisotroana kely madinika, na any amin'ny trano fisakafoanana lamaody. Ny ankizy dia tia ny trano fiompiana gilasy, ary ny olon-dehibe dia afaka mankafy kizinay italiana, frantsay, espaniola, Peroviana, Japoney, Thai. Ny andrim-panjakana malaza indrindra dia:
Afaka mikaroka ao an-trano ianao, ka afaka mijery ao amin'ny cafe "Cool pancakes."
Raha mila miala amin'ny tongotrao ianao, tokony handeha any amin'ny "Puerto Belavista", izay atolotra ireo mpizahatany sy divay.
Ny pizza tsara tarehy dia hita ao amin'ny "Factory Factory", ary afaka manandrana cocktails tsy hay hadinoina ao amin'ny Bar der Lux Lux.
Ny firaiketam-barotra dia ahitana karazana zava-pisotro maherin'ny 200 mahery, anisan'izany ny champagne, divay. Ny Masters dia mamoaka cocktails ahitana kalitao miavaka sy tsiro tsy hay hadinoina. Ny hany azoko atao dia ny manome antoka fa ny habetsahan'ny alikaola ao amin'ny ra dia tsy mitsahatra ny manamarina ny ambiny ao amin'ny foiben'ny fividianana.
Mandeha be dia be ny mpizahatany, afaka mandehandeha eny amin'ny faritra manodidina ny faritra ny mpizaha tany. Anisan'izany ny teatra, ny fiangonan'i Recoleta Dominica ary ny tranon'i La Chascone , izay nipetrahan'ny poeta Pablo Neruda. Misy ihany koa ny fampiratiana samihafa natokana ho an'ny zavakanto, sary sy lahatsary, ary lohahevitra hafa.
Ahoana ny fandehanana any afovoan'i Patio Bellavista?
Mba hahatongavana any amin'ny Centre, mila mankany amin'ny fiantsonana metro Bakedano ianao, ary avy eo dia mamakivaky ny faritra iray mankany amin'ny làlana Pio Nono. Ny ivon'i Patio Bellavista dia eo anelanelan'ny làlan'i Biljavist sy Dardinac. Eto dia misy pizza maromaro, McDonald's ary na Starbucks Coffee mihitsy aza.
Ahoana ny fomba hananganana saka mikarokaroka?
Karatra fitsingerenan'ny Scrapbooking
"Izany no maha-vehivavy antsika rehetra": sary sangisangy 100
Ahoana ny fihinan'ny manga?
Ohatrinona ny tokony hiarovako ny rano ho an'ny aquarium?
Vovon-trano eny ambony balcony amin'ny tananao
Nimesil ho an'ny ankizy
Ahoana ny fametrahana toaka ho an'ny ririnina vaovao?
Tafio eny am-baravarankely